Izinhlelo zeCobia: Imidiya Yezokuxhumana Ezenzakalelayo kanye Nokuhlanganiswa | Martech Zone
ULwesibili, May 19, 2015 UMsombuluko, May 18, 2015 Douglas Karr
Umhlaba wokumaketha ushintshe kakhulu ngenkathi yemithombo yezedijithali nemithombo yezokuxhumana. Ngesikhukhula sezixazululo ezitholakalayo namuhla, izinsizakusebenza zochwepheshe zokuqinisekisa ithonya eliningi zisezingeni eliphakeme kakhulu. Amathuluzi amaningi ahlinzeka ngezinsizakusebenza nezinsizakalo zebhizinisi, kepha into eyodwa abangayinikezi uhlelo olusiza ukuthi uthole amakhasimende akho ngesikhathi akhombisa ngaso isidingo.
Izinhlelo zeCobia isungule uhlelo olwenzelwe ukuguqula umdlalo wokuthi amabhizinisi afinyelela kanjani kumakhasimende. Lapho ubhalisa, ibhizinisi lakho lizothola ikhasi elihle lokufika, futhi lizofakwa ohlwini lwemibhalo yabo kanye nasezindaweni zeGoogle.
Cobia Systems Ukuqapha Komphakathi
Ngqo ekhasini lokuqala ledeshibhodi yakho, abanikazi bamabhizinisi banikezwa amathuluzi wokuhlola izingxoxo zenethiwekhi yabo, kufaka phakathi abathengi abangaba khona ngokushesha abafuna usizo. Isistimu yabo incike olwazini oluvela kuchwepheshe - umnikazi webhizinisi - ukukhomba imishwana efanele ibhizinisi labo. Ngemuva kokuthi kufakwe amagama angukhiye, lokhu kusetha uhlelo lweCobia egiyeni lohlaka lokumaketha ngokugcwele.
Cabanga ukuthi i-tweeting yekhasimende ithi umugqa uhamba kancane kangakanani endaweni yakho yebhizinisi, bese ukwazi ukuphendula ngokushesha ngesigqebhezana nokuxolisa ukuze ubasize ngokuphazamiseka kwabo. Ngeke yini amathuba avulekele ibhizinisi lakho?
Indawo yokuthengisa izimoto ingakhomba elinye lamagama athandwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, Ngifuna imoto, ngempendulo enikezwe ikhasimende ngokuya ngemininingwane yabantu - lokhu ukuzibandakanya komuntu siqu okwenzelwe izethameli zakho eziqondiwe. Ukulawula okushiwo ngabantu ngawe nangebhizinisi lakho kusenhliziyweni yokuphathwa kwedumela, okukhuthazwa uhlelo lwabo ngokufinyelela nje ngokumane uphendule kokuthunyelwe ngumsebenzisi.
ICobia Systems Article Syndication
Ingxenye ebalulekile yokuxhumana namakhasimende akho ukugcina izihloko zokuxoxa ezisesikhathini. Isici sokuhlanganiswa kwe-athikili kaCobia sakhiwe ngesikhathi sakho engqondweni ngokusesha kuwebhu izindaba ezihambisana kakhulu namagama wakho angukhiye afanele.
Njengokwengezwa okuzenzakalelayo kokuqukethwe kwenkampani yakho, lezi zihloko zizolayini wokuhlunga kwakho okwezifiso, bese zizothumela odongeni lwakho lwe-Facebook noma lwe-Twitter kungakapheli amahora ayisithupha. Umsebenzi kulezi zihloko ezidumile, ezihlolwe nguwe, zizobonwa yinethiwekhi yekhasimende lakho, ngokuya ngokuya kufinyelelwe yinkampani yakho.
Ukukhangisa nokwaziwa komkhiqizo yizici ezinqumayo ekuheheni ibhizinisi elisha nasekugcineni amaklayenti amanje. Ukuphikelela kuzala imiphumela, ikakhulukazi lapho amakhasimende azi ukuthi kukhona isivumelwano esithintekayo. Kokubili ukukhangisa kuheha amakhasimende amasha kanye nokubamba kabusha amaklayenti amadala.
Imikhankaso YeCobia Systems
With Izinhlelo zeCobia'umkhankaso, amakhasimende akho ngeke aphuthelwe ukushaya okuvela enkampanini yakho. Ngaphakathi kohlaka lwabo, ungakha imikhankaso yokuthengisa ephelele efaka incazelo nokubizelwa esenzweni njengekhodi yokuphromotha. Uzokwazi ukulawula isikhathi somkhankaso wakho nokuthi ngubani othola ukuqhuma kwakho ebangeni elikhetheke kakhulu. ECobia, abasebenzisi babo banayo uhlangabezane nokwanda kwabalandeli ku-100% kuya ku-3,400% emakhasini abo ebhizinisi besebenzisa imikhankaso yabo.
ICobia Systems ikunikeza amathuluzi okucabanga ngokwakhayo, yenza lula imisebenzi yakho yokumaketha yansuku zonke ibe yipulatifomu eyodwa, futhi ikunikeze imiphumela ekhonjiwe engenamkhawulo ukuthuthukisa ukufinyelela kwakho. Kungani amakhasimende akho kufanele akuseshe? Kufanele ubathole. UDevan Sharma - i-CEO noMsunguli weCobia Systems
Ochwepheshe embonini yezokumaketha bazoqapha okushiwo ngabantu ngomkhiqizo wakho emakethe yedijithali kanye nokubuka izitayela nezinguquko emncintiswaneni ukuze kuqinisekiswe ukuthi umkhiqizo wakho uhlala usesikhathini futhi uhlangabezana nazo zonke izingqinamba ezenziwa ngamakhasimende. Ukukhangisa kuzokuvumela ukuthi ufinyelele kumkhiqizo wakho futhi udonse izidingo zamanje zamakhasimende kucebo lakho lemakethe lansuku zonke lokuthengisa. Ubuhlakani bakho namathuluzi wokulawula isithunzi sakho esiku-inthanethi kuyadingeka ukunqanda okuqukethwe okudala futhi okuyisidina ekuqhumeni okuqhubekayo kwemikhankaso yokukhangisa.
Tags: ukuhlanganiswa kwendatshanaimithombo yezokuxhumana ezenzakalelayocobia izinhleloUDevan SharmaIsiqondisigoogle ibhizinisisocial mediaukuqapha ezokuxhumukuqapha komphakathi